U-2018 uqala ngemvula engaphezu kwamanani ajwayelekile | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngokungafani nonyaka wezi-2017 esiwushiye njengofudumele kakhulu kusukela ngo-1965 nowesibili owomile, unyaka ka-2018 ungene ngemvula eningi ezweni lonke, kweqe isilinganiso esejwayelekile.
Izimvula zikuthuthukisile ukusilela kwamanzi, yize kusekude kunokujwayelekile. Anjani amadamu ethu ngemuva kwezimvula nokuwa kweqhwa?
1 Imvula eningi
2 Ukuqhathanisa no-2017
3 Izinhlelo zesomiso
U-2018 uqale ngemvula eningi ezweni lonke, ephakeme kakhulu kunamanani ajwayelekile ezinsukwini zokuqala zikaJanuwari. Izimvula ezinamandla ezenzeke nokuwa kweqhwa nazo zenzeka ekupheleni kukaDisemba zisizile ekunciphiseni kancane ukusilela kwamanzi iSpain esiye sakuthola kusukela ekuqaleni konyaka we-hydrological ngamaphuzu acishe abe yi-10.
Amaphesenti wamanzi angamadamu eSpain Ikhuphukile isuka ku-35% yaya ku-45%. Ngalesi sikhathi, ku-2017, besiku-50% kuthi eminyakeni eyi-10 edlule sibe ku-60%. Ngokwalokho ongabona ukuthi sikude kangakanani namanani ajwayelekile, ngoba sikhuluma ngamanani aphakathi nendawo.
Imvula yenzeka cishe kuyo yonke indawo enenhlonhlo, ngaphandle kwasenyakatho yeCastilla y León, empumalanga yeCastilla-La Mancha nase-Andalusia nasendaweni yaseLevante, ngokusho kwedatha ehlanganiswe kwiState Meteorological Agency (Aemet).
Inani elingaphezu kwamalitha ayi-10 ngemitha skwele ngalinye selinqwabelene enhlonhlweni enkulu naseziqhingini zeziqhingi. Kuyo yonke ingxenye esentshonalanga ye-Andalusia, amasistimu aseCentral nase-Iberia nakuyo yonke inhlonhlo esenyakatho, esukela eGalicia iye eGerona, kube khona yeqa kuze kufike kumalitha angama-30 ngemitha eyisikwele.
Inani elivelele kakhulu lemvula ngamalitha ayi-100 ngemitha eyisikwele ezinqotshiwe ezindaweni ezingazodwa ezifundazweni zasePontevedra naseLa Coruña, ezindaweni zaseCantabria nasenyakatho yeGuipúzcoa neNavarra.
Khumbula ukuthi idatha ye-Aemet ivuselelwa kusukela ngoJanuwari 11. Kusamele babhale kuze kube manje lonke inani lamanzi elifinyelela kumadamu emifula eyinhloko yemifula efanayo.
Uma kuqhathaniswa nedatha yalesi sikhathi sonyaka ka-2017 (bekungokwesibili eyomile futhi ifudumele kakhulu kusukela ngo-1965), u-2018 uqale imvula enkulu. Ukuntuleka kwemvula enqwabelene ngonyaka wezi-2017 isiqinise isimo sesomiso futhi kwaholela ekwehleni okuqhubekayo kwezinga lamachibi amadamu.
UMnyango wezoLimo nokuDoba, ezokudla nezemvelo uzazise izimvula ngoJanuwari futhi ubonile ukuthi lezi zimvula zivumele ukuthi zisuke ukushoda kwamanzi ngamaphesenti angama-44,9 kuya kumaphesenti angama-35,5. Imvula eyenzekile izosiza ngokukhethekile ukukhula kwamabele kanye nenkundla yonke.
Noma kungafanele sehlise ukuqapha kwethu okwamanje, ngoba sikude kakhulu namanani ajwayelekile wamanzi angcolile. Ukonga amanzi kubalulekile uma sifuna ukonga imithombo yamanzi.
Ukwehlisa isomiso, ezinyangeni ezedlule uHulumeni unyuse iphakethe lemisebenzi ephuthumayo, futhi phakathi kwalokhu kuveza izenzo ezivumile gqugquzela ama-cubic hectometres angama-350 angeziwe emigodini yaseSegura naseJúcar, lezo ezihlupheka kakhulu ekucindezelekeni kwamanzi.
Kusukela ngoMeyi 2016 kuze kube manje, uHulumeni ubelokhu enza izinyathelo zokunciphisa isomiso emabhesheni aseSegura naseJúcar. Okwakho, ngaphezulu kwama-euro ayizigidi ezingama-83 abelwe. Isomiso siyinkinga enkulu kabi kwizakhamizi.
Amanzi kufanele asuswe lapho engaba khona, ngoba alina. Ngalesi sizathu, izigidi ezingama-17,3 zama-euro zabelwe phakathi kuka-2015 no-2017 ukukhulisa inani lamanzi anosawoti. Ngaphezu kwalokho, ukwenza ukuchelela kube sesimanjemanje nokwenza ngcono inani lamanzi asetshenziswa kwezolimo, ama-euro ayizigidi ezingama-60,7 abelwe izenzo, ikakhulukazi eHuesca, León naseValencia.
Ukuze yehlise ukuqapha, uMnyango wethule umkhankaso wokuqwashisa ngemvelo ngokusetshenziswa kwamanzi ngesiqubulo esithi “Amanzi asinika impilo. Ake sinakekele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » U-2018 uqala ngemvula engaphezu kwamanani ajwayelekile